အရောင် Glow: ပဟေဠိစုစည်းမှု | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » အရောင် Glow: ပဟေဠိစုစည်းမှု
အရောင် Glow: ပဟေဠိငွေကောက်ခံ APK ကို
အကောင်းဆုံးပဟေဠိငွေကောက်ခံဂိမ်း Play, COLOR GLOW
COLOR GLOW တစ်ဦးကိုအကောင်းဆုံးပဟေဠိဂိမ်းစုဆောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်မာစတာရန်သင်ယူနှင့်ပျော်စရာရန်လွယ်ကူဖြစ်ကြောင်းပုံစံမျိုးစုံ, လိုင်းများ, အရောင်များ, နံပါတ်သို့မဟုတ်သင်္ကေတများပါဝငျသညျ။ သငျသညျယုတ္တိဗေဒ, ပုံစံအသိအမှတ်ပြုမှုသို့မဟုတ် sequence ကိုဖြေရှင်းအပါအဝင်သင့်ရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်, ကြီးထွားနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့ကိုလည်းစွဲလမ်းပဟေဠိဂိမ်းတွေနဲ့စဉျးစားစရာပျော်စရာခံစားနိုင်။ အချို့သောပဟေဠိဖြေရှင်းနိုင်နှင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်စေခြင်းငှါ, ဂိမ်းတွေနဲ့သင့်ဦးနှောက်နှင့်အဆင့်တိုးမြှင့်။
စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ဦးနှောက်ကြော်ငြာအတိုအဖြစ်သင့်ဦးနှောက်ကိုလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်တစ်ဦးချင်းစီပဟေဠိဖြေရှင်းခြင်းအားဖြင့်သင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ သငျသညျအခြို့သောခက်ခဲပဟေဠိမှာ strategize သူတို့ကိုအောငျနိုငျဖို့ရှိသည်။ တစ်နေ့နေ့မှာ, သင်ပဟေဠိရှင်ဘုရင်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ THE ပဟေဠိစည်းကမ်းများ!
•ကလေးတွေ & မိသားစုနှင့်အတူအမြန် & ပေါ့ပေါ့ဂိမ်း Play!
•ထူးခြားသောအဆင့်ကိုဒီဇိုင်းနှင့်အတူအတွေ့အကြုံအပြည့်အဝ immersive ခံစား!
•အတွေ့အကြုံမြင့်မား optimized ဂိမ်း!
•အနေနဲ့တစ်လောကလုံး app ကိုအဖြစ်ပံ့ပိုးမှုမိုဘိုင်းဖုန်းများ & tablet များ။
•အဘယ်သူမျှမ Wi-Fi, အော့ဖ်လိုင်းဖြင့်ဂိမ်း! နေရာတိုင်းဂိမ်းပျော်ရွှင်ခံစားပါ!
•အဘယ်သူမျှမအချိန်ကန့်သတ်မှု, လုံလောက်သောအချိန်နှင့်အတူ Play!
•ထိပ်တန်း rated ဂိမ်း! အရောင် Glow တူသောလူအတော်များများ!
COLOR GLOW အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဖြစ်ပဟေဠိဂိမ်းပါဝင်သည်:
NUMBER ကို LINK
•စိန်ခေါ်မှု 350 အဆင့်!
•ဆဋ္ဌဂံလုပ်ကွက်ဆွဲပါ & ဘုတ်အဖွဲ့မှာသူတို့ကိုထားပါ။
One Touch ပဟေဠိ
•ပေးထားသောကိန်းဂဏန်းများ (ပုံစံမျိုးစုံ) ကလိုင်းဆွဲပါ။
•တစ်ချက်ထိတွေ့ရုံ (လိုင်း / လေဖြတ်ခြင်း) ကအားလုံးအစက်ချိတ်ဆက်ပါ။
အပေါင်းသည်အလင်း: LINK တံတား BRIDGE ပဟေဠိ
•သူတို့အပျေါမှာဖွင့်ဖို့ဘက်ထရီတွေနဲ့မီးသီး (မီးခွက်) ချိတ်ဆက်ပါ။
•အသီးအသီးပဟေဠိဖြေရှင်းနိုင်မှစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ပြီးအားလုံးမီးသီးအပေါ် Turn ။
•ကိုယ့် wire ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုင်းထိပုတ်ပါ။
•ကျွန်ုပ်တို့သည်အသစ်ကပဟေဠိဂိမ်းစဉ်ဆက်မပြတ် add ပါလိမ့်မယ်။
• COLOR Glow ကြော်ငြာများနဖူးစည်းစာတမ်း, insterstitial နှင့်ဗီဒီယိုကြော်ငြာတွေပါဝင်သည်ပါရှိသည်။
• COLOR Glow အရိပ်အမြွက်, ကျောက်မျက်သို့မဟုတ် AD-အခမဲ့တူသော In-app ကိုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းချပါတယ်။
• COLOR Glow ဂိမ်းပိုကောင်းအောင်နှငျ့အခြို့န်ဆောင်မှုများပေါင်းစည်းဖို့အချို့သောခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။
- စသည်တို့ကိုကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုနှင့်အမြင်ဆက်သွယ်မှု, အင်တာနက်ကနေဒေတာတွေကိုလက်ခံ, သိုလှောင်ရေး, ဓါတ်ပုံများ / မီဒီယာ / ဖိုင်များ, ကာကွယ်ဆေးအိပ်ပျော်နေတဲ့, တုန်ခါမှုထိန်းချုပ်ရေး,
ရဲ့ COLOR Glow ကြပါစို့
Service ၏စည်းမျဉ်းများ: pvg-mpv-nlog.pivotgames.net/conf/Terms_of_Service-En.html
ဒေတာသိမ်းဆည်းဖို့• Fixed အနေနဲ့ပြဿနာ
ကျနော်တို့ကအမြဲသင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကြိုဆိုပါတယ်။ ရဲ့ COLOR Glow ကြပါစို့
21.68 ကို MB
PivotGames ။ Inc က